Zakariye Ismaaciil oo ka hadlay Sababtii uu Uga Mid noqday Ururka Al-Shabaab[Warbixin] | SAHAN ONLINE
Zakariye Ismaaciil oo ka hadlay Sababtii uu Uga Mid noqday Ururka Al-Shabaab[Warbixin]
Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horay uga mid ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa wareysi uu siiyey BBC-da uga hadlay sababtii uu Al-Shabaab ugu biiray ,sababtii uu uga baxay ,noloshiisa iyo mustaqbalkiisa Siyaasadeed.
Sarkaalkan ayaa Saddexdii bilood ee ugu danbeysay ku noolaa dhisme ay ilaalo xoogan ka hayso hay’adda Nabad-sugida Qaranka ,taasoo noqoneysa markii ugu horeysay oo u la fariisto Suxufi ajnabi ah ka dib markii uu kasoo baxay kooxda Al-Shabaab.
Zakariye oo ahaa Taliyihaha Sirdoonka ee kooxda Al-Shabaab waa 33 jir,isagoona kamid noqday kooxda 2007 ,wuxuuna ku sheegay Ujeedada ku biiritaankiisa ay ahayd in Soomaaliya laga Xoreeyo Ciidamadii Itoobiya ee soo galay dalka.
….Ujeeddadii aan Al-shabaab ugu biiray waxay ahayd in Somalia laga saaro ciidamo dalalka dariska ka mid ah oo Fara-gelin ku sameeyay, laakiin Waddadaas waa la qalday….
Zakariye si wanaagsan ayuu luuqada Ingiriiska ugu hadlaa ,isagoona kasoo baxay Jaamacad kutaala dalka Pakistaan oo u wax kusoo bartay ,wuxuuse sheegay imaanshihiisii dalka uu doonayey in uu guurdado oo mustaqbal wanaagsan sameysto.
Sidoo kale Zakariye Ismaaciil ayaa sheegay in uu Xubin ka noqday Sirdoonka kooxda Al-Shabaab sanadkii 2010 balse wuxuu iska fogeeyey in uu xubin ka ahaa qeybta amniyaadka ee qorsheysa weerarada is-qarxinta.
Dhanka kale, Zakariye wuxuu xusay in hoggaankii hore Al-shabaab uusan wax wadahadal ah la gelin hoggaamiyeyaashii kale, isla markaana qaar ka mid ah saaxibadiisa la dilo, qaarkoodna la xiro oo illaa iyo haatan ay xabsiyo ku jira. Isagoo intaas ku daray inay isku dayeen Al-shabaab inay isaga dilaan, balse uu si dirqi ah uga baxsaday, haddana ay ugu yeeraan erayga Murtad oo ah inuu ka baxay diinta Islaamka.
Su’aal ahayd wuxuu qabto ayuu kaga jawaabay; “In inta badan uu buugaag akhriyo uuna isticmaalo taleefoonnada gacanta, isla markaana uu leeyahay baro bulshada lagula xiriiro sida Facebook iyo Twitter.”
Mar kale ayaa la weydiiyay; sida uu u arko Weerarkii ay Al-shabaab ku qaaddy Jaamacada Gaarisa ee ay Al-shabaab sheegatay mas’uuliyadiisa, wuxuuna ku jawaabay.
“Runtii waan ka naxay weerarkaas, arday dhallinyaro ah oo Jaamacad dhiganeysay ayaa la laayay, aniga aan iska soo qaado anigoo jaamacad dhiganaya ma jeclayn inaan la i dilo. Waana weerar aan raad ku laheyn Islaamka, aad ayaana uga xumahay.”
Wariyaha wargeyska ka qaadayay Zakariye Xirsi ayaa Warbixintiisa ku sheegay in aad loo dhaqaaleeyo, si wanaagsana loola dhaqmo, iyadoo Zakariye Xirsi laftiisu ka mahad-celiyay sida loosoo dhaweeyay iyo sida loola dhaqmo.
Ugu dambeyn, mar la weydiiyay qorshihiisa siyaasadeed maadaama uu horay uga tirsanaa Al-shabaab inuu doonayo inuu xildhibaan noqdo, ayuu ku jawaabay isagoo ilko-cadeynaya “Jagada muhiim ma ahan ee waxaa muhiim ah inaad dalka bad-baadiso.”